Waa maxay iyo sidee u shaqeeyaa warshad tamar-dhuleedka | Cusbooneysiinta Cagaaran
Jarmal Portillo | | Tamar-dhuleedka, Tamarta dib loo cusboonaysiin karo
Tamarta dhulka hoostiisa waa nooc ka mid ah tamarta la cusbooneysiin karo oo awood u leh inay ka faa'iideysato kuleylka dhulka hoostiisa si ay u kululeyso dhismayaasha ayna u hesho biyo kulul hab deegaan ahaan. Waa mid ka mid ah ilaha la cusboonaysiin karo ee yar, laakiin natiijooyinkiisu waa kuwo aad u cajiiba.
Tamartaan Waa in lagu soo saaraa warshad dhuleedka, laakiin waa maxay dhirta dhuleed iyo sidee u shaqaysaa?
1 Warshad tamar-dhuleedka
2 Kheyraadka tamar-dhuleedka
3 Sidee u shaqeeyaa warshad tamar-dhuleedka
3.1 Beerta dhuleedka
3.2 Habka jiilka
4 Noocyada dhirta tamar-dhuleedka
4.1 Dhirta uumiga qalalan
4.2 Geedaha Flash Steam
4.3 Xarunta Dhexe ee Binary
Warshad tamar-dhuleedka ayaa ah xarun laga soo saaro kuleylka dhulka si loo soo saaro tamar dib loo cusboonaysiin karo. Qiiqa kaarboon dioxide ku sii daaya cimilada ee jiilka noocan ah ee tamarta waa qiyaastii 45 g celcelis ahaan. Tani waxay ka dhigan tahay wax ka yar 5% qiiqa u dhiganta dhirta gubta shidaalka, sidaas darteed waxaa loo qaadan karaa tamar nadiif ah.
Soosaarayaasha ugu badan ee tamar-dhuleedka dhulka adduunka waa Mareykanka, Filibiin iyo Indooniisiya. Waa in lagu xisaabtamo in tamar-dhuleedka, inkasta oo la cusboonaysiin karo, uu yahay tamar xadidan. Way xadidan tahay, maahan sababta oo ah kuleylka Dhulka ayaa sii yaraanaya (waa ka fog yahay), laakiin waxaa kaliya looga soo saari karaa si macquul ah qaybo ka mid ah meeraha halkaasoo dhaqdhaqaaqa kuleylka dhulku ka awood badan yahay. Waxay ku saabsan tahay kuwa "baro kulul" meesha tamar badan ayaa laga soo saari karaa halkii aag.
Maaddaama aqoonta ku saabsan tamar-dhuleedka aad u horumarsan tahay, Ururka Tamarta Dhulka ayaa ku qiyaasaya in kaliya laga faa'iideysanayo hadda 6,5% ka mid ah awooda adduunka ee tamartani.
Maaddaama qolofka dhulka uu u dhaqmayo sidii lakab daaha ka daboolaya, si loo helo tamar-dhuleedka, dhulka waa in lagu mudaa tuubooyin, magma ama biyo. Tani waxay u oggolaaneysaa sii daaya gudaha iyo qabashadeeda iyada oo loo marayo dhirta korantada.
Soosaarka korantada dhulka hoostiisa waxay u baahan tahay heerkul sarreeya taasi waxay ka imaan kartaa oo keliya meelaha ugu dhulka ugu hooseeya. Si aan u lumin kuleylka inta lagu guda jiro safarka geedka, marinnada macmalka, aagagga guga kulul, wareegga hawo-mareenka, ceelasha biyaha ama isku-darka dhammaantood waa in la dhisaa.
Tirada ilaha laga heli karo tamarta noocan ah waxay ku sii kordheysaa qoto dheerida loo qodayo iyo u dhawaanshaha geesaha taarikada. Goobahan waxqabadka juquraafi ayaa ka weyn, markaa waxaa jira kuleyl badan oo la isticmaali karo.
Sidee u shaqeeyaa warshad tamar-dhuleedka
Hawlgalka warshad tamar-dhuleedka ayaa ku saleysan hawlgal aad u adag oo ka shaqeeya nidaam dhir-beeris. Si kale haddii loo dhigo, tamarta waxaa laga soo saaraa dhulka gudihiisa waxaana loo qaadaa geedka meesha korontada laga dhaliyo.
Goobta juquraafi ahaanta aad ka shaqeysid waxay u dhigantaa aagga dhulka oo leh jiiraad dhuleed oo ka sarreeya sidii caadiga ahayd. Taasi waa, koror weyn oo heerkulka oo qoto dheer. Aaggan oo leh jaranjaroolo dhuleed sare ayaa caadi ahaan waxaa sabab u ah jiritaanka biyo-biyood ku kooban biyo kulul oo keyd u ah kuna xaddidan lakab aan la mari karin oo ilaaliya kuleylka iyo cadaadiska oo dhan. Tan waxaa looyaqaanaa kayd biyood dhulka hoostiisa ah waana halka laga soo saaro kuleylka si loo helo koronto.
Ceelasha ka soo saarida kuleylka dhulka ee ku xirma warshada korantada waxay ku yaalliin aagaggan juquraafi. Uumiga waxaa laga soo saaraa shabakad tuubooyin ah waxaana loo qaadayaa geedka meesha tamarta kuleylka ee uumiga waxaa loo beddelaa tamar farsamo kadibna waxaa loo beddelaa tamar koronto.
Habka jiilku wuxuu ka bilaabmaa soo saarida uumiga iyo isku darka biyaha ee hawo-dhuleedka. Markii loo qaado geedka, uumiga ayaa laga soocayaa biyaha dhulka hoostiisa iyadoo la isticmaalayo qalab loo yaqaan kala-qeybiyeha. Marka uumiga la soo saaro, biyaha ayaa mar kale lagu soo celiyaa dusha sare kaydka si dib loogu kululeeyo (markaa waa il la cusboonaysiin karo).
Uumiga la soosaaray waxaa loo qaadaa geedka wuxuuna dhaqaajiyaa marawaxadaha oo rotor-keedu rogrogo ugu yaraan 3 kacaan daqiiqadii, kaas oo isna dhaqaajiya matoor-dhaliyaha, halkaasoo isku dhaca ku yimaada aagga elektromagnetic-ka uu u beddelo tamarta farsamada tamarta korantada. 13800 volts ayaa ka soo baxa matoor-dhaliyaha markii loo wareejiyo qalabka wax lagu beddelo, waxaa loo beddelaa 115000 volts. Tamartaani waxaa lagu soo bandhigay khadadka korantada sare si loogu diro saldhigyada iyo halkaas oo looga tago guryaha intiisa kale, warshadaha, iskuulada iyo isbitaalada.
Uumiga dhulka hoostiisa ayaa dib loo ururiyey oo dib loogu celiyey dhulka hoostiisa ka dib markii uu soo rogay marawaxadaha Nidaamkani wuxuu ka dhigayaa in biyaha dib loogu kululeeyo kaydka dhulka hoostiisa oo ay ka dhigaan soo saar tamarta la cusboonaysiin karo, maaddaama markii dib loo kululeeyo ay u rogmato uumiga oo ay tarbineynta mar kale rogto Waxaas oo dhan, waxaa la dhihi karaa tamar-dhuleedka waa tamar nadiif ah, meerto ah, dib loo cusboonaysiin karo oo waara, Maaddaama dib-u-soo-kabashada kheyraadka tamarta lagu soo saaro dib loo soo celiyo. Haddii biyaha kala go'ay iyo uumiga isku ururay aan dib loogu celin haanta biyaha lagu daweeyo ee dhulka hoostiisa ku jirta, looma tixgelin doono inay tahay tamar la cusboonaysiin karo, maaddaama, markii kheyraadku dhammaado, aan uum kale la soo saari karin.
Noocyada dhirta tamar-dhuleedka
Waxaa jira seddex nooc oo ah tamarta tamar-dhuleedka.
Dhirta uumiga qalalan
Xirmooyinkaani waxay leeyihiin naqshad fudud oo duug ah. Waxay yihiin kuwa si toos ah uguumi uumi heerkulka qiyaastii 150 darajo ama ka badan in la wado marawaxadaha oo la soo saaro koronto.
Geedaha Flash Steam
Dhirtani waxay ku shaqeysaa kor u qaadista biyaha kulul cadaadiska sare ee maraya ceelasha una soo bandhiga taangiyo cadaadis hooseeya. Marka cadaadiska la yareeyo, qaar ka mid ah biyuhu way uumi baxaan oo waxay ku kala baxaan dareeraha si ay u kaxeeyaan marawaxadaha. Sida xilliyada kale, biyaha dareeraha ah ee xad dhaafka ah iyo uumiga isku ururay waxaa dib loogu soo celiyaa keydka.
Xarunta Dhexe ee Binary
Kuwani waa kuwa ugu casrisan waxayna ku shaqeyn karaan heerkulka dareeraha kaliya 57 darajo. Biyaha ayaa ah kuwo dhex dhexaad ah oo keliya waxaana la dhinac mariyaa dheecaan kale oo leh biyo karkaraya oo aad uga hooseeya biyaha. Sidan oo kale, markay taabato biyaha, xitaa heerkulkeedu yahay 57 digrii oo keliya, way uumi baxaysaa waxaana loo isticmaali karaa in lagu wareejiyo marawaxadaha.
Macluumaadkan, hubaal shaki kuma jiro hawlgalka warshad tamar-dhuleed.
Sidee buu u shaqeeyaa kuleylka kuleylka? Waxaan kuu sheegeynaa:
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Tamarta dib loo cusboonaysiin karo » Waa maxay iyo sidee u shaqeeyaa warshad tamar-dhuleedka
Sharadka dhuxusha ayaa sumeeya hawada Vietnam